OpenTitan, tetikasan'ny loharano misokatra an'ny Google hamoronana chips azo antoka | Avy amin'ny Linux
OpenTitan, tetikasan'ny loharano misokatra an'ny Google hamoronana chips azo antoka
vao haingana nivoaka ny vaovao fa niara-niasa tamin'ny orinasa maromaro i Google ny teknolojia hampivelatra ny puce source azo antoka sy malalaka. Ny tanjon'ny fiaraha-mitantana vaovao dia ny hamoronana endrika chip Matanjaka ho an'ny fampiasana amin'ny foibe data, mpizara ary ny peripheraly napetraka amin'ny toerana misy fitsikerana.
Ny tetikasa dia antsoina hoe OpenTitan, fandraisana andraikitra misokatra namboarina hamporisihana ny fampandrosoana ny antsoina hoe teknolojia root-of-trust ho an'ny ivon-tahiry sy fitaovan'ny mpanjifa. Ny orinasa dia mikasa ny hampiasa azy amin'ny finday avo lenta amin'ny Android, ary koa ny fitaovana fiarovana ny fitaovana samihafa.
Google no nilaza an'izany OpenTitan dia hitantana ny vondrom-piarahamonina LowRisc. Anisan'ny mpiara-miasa ny ETH Zurich, G + D Mobile Security, Nuvoton Technology, ary Western Digital.
Amin'izany fotoana izany, Ny fahafaha-mampifanaraka ny OpenTitan amin'ny ankamaroan'ny fitaovana na rindrambaiko rehetra dia notakiana. Rehefa faritana manana fototry ny fahatokisana ny rafitra iray dia midika izany fa misy puce na modely manokana tompon'andraikitra amin'ny fanakanana ireo fanandramana hacking.
Tamin'ny telefaona talohaNy Pixel 4 an'ny Google, ohatra, ny microcontroller Titan M dia mitana izany andraikitra izany. Izy io dia processeur kely iray izay manamarina ny fahamendrehan'ny firmware amin'ny findain'ny mpampiasa isaky ny mirehitra izy ireo.
Mandritra izany fotoana izany, amin'ny foibe angon-drakitra, ny fototry ny fahatokisana dia matetika no fantatra amin'ny hoe modely fiarovana fitaovana, fitaovana voatokana izay 'miaro' ny lakilen'ny encryption miaraka amin'ireo mpizara no manafina ny angon-drakitra tsiambaratelo. Ny modules security hardware dia tafasaraka amin'ny sisa amin'ny tamba-jotra ary matetika tonga amin'ny tranga mahazaka fanoherana.
Amin'ny alàlan'ny OpenTitan, Google dia manantena ny hanome ny indostria bara fananganana teknolojia mahazatra hamoronana vokatra faka matoky.
Ilay goavambe fikarohana dia mamolavola endrika ankehitriny chip namboarina manokana ho an'ny tetikasa mampiasa ny maritrano RISC-V malaza. Betsaka koa ny singa hafa ao anatin'ireo sanganasa, ao anatin'izany ny firmware, coprocessoror izay namboarina mba hikirakira ny asa cryptographic, ary ny mpamorona isa nomerika ara-batana amin'ny famoronana lakile fanoratana.
«Ny chip azo avy amin'ny loharano misokatra dia afaka manatsara ny fahatokisana sy filaminana amin'ny alàlan'ny famolavolana ary ny mangarahara amin'ny fampiharana »
"Ny olana dia mety ho hita mialoha ary hihena ny filàna fahatokisana an-jambany." Nanampy izy ireo fa ny fizarana an-kalalahana ireo haitao fototra dia afaka "mamela sy mampiroborobo ny fanavaozana amin'ny alàlan'ny fandraisana anjara amin'ny famolavolana loharano misokatra." Mpanoratra Royal Hansen, Lehiben'ny mpitandro ny filaminana misahana ny fampahalalam-baovao an'ny Google ary ny mpitarika OpenTitan Dominic Rizzo ao amin'ny lahatsoratra bilaogy.
Miasa mavitrika i Google mba hisarihana ny tontolo iainana ny mpandray anjara. Ny orinasa dia namindra ny fitantanana OpenTitan ho LowRisc, orinasa iray ao amin'ny University of Cambridgey dia mandray mpiasa ivelany hanohana ny fampandrosoana.
Nanoratra an'izany i Hansen sy Rizzo ny teknolojia novokarina tamin'ny alàlan'ny OpenTitan dia
"Mahasoa ho an'ny mpanao chip, izay manome sehatra, ary orinasam-pandraharahana mitady fiarovana mba hiarovana ny fotodrafitrasan'izy ireo."
Izay teknolojia ampandraiketan'ireo fikambanana ireo amin'ny OpenTitan dia mety hanaporofo fa mahasoa amin'ny Google. Ny orinasa dia mampiasa chip root azo itokisana ao amin'ny telefaona Pixel, takelaka Pixel Slate, ary ny tena zava-dehibe, ao amin'ireo ivon-toerany mba hiarovana ireo mpizara amin'ny fanafihana.
Ny fampanantenan'ny chip fiarovana azo antoka kokoa aza dia mety hakana fanahy ny sasany amin'ireo mpifaninana aminy Google hiditra ao amin'ny OpenTitan.
Apple Inc., ohatra, dia manana processeur root azo antoka antsoina hoe T2 miaraka amina maodely Mac sasany, raha toa kosa ny Amazon Web Services Inc.
Amin'ny lafiny iray, manararaotra ny toerany amin'ny fotodrafitrasa angona sy ny haitao mivelatra, Western Digital dia miara-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny tontolo iainana hanatsara ny rafitra OpenTitan hihaona amin'ny fitakiana fiarovana isan-karazany amin'ny tranga fampiasana tahiry-centric fototra-to-edge, ao anatin'izany ny rindranasa fianarana milina, finday avo lenta, ary fitaovana mifandray amin'ny Internet of Things (IoT).
Vaovao misimisy momba izany, ato amin'ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » OpenTitan, tetikasan'ny loharano misokatra an'ny Google hamoronana chips azo antoka
Ny iray amin'ireo tanjon'ny Google amin'ity tetik'asa ity dia ny hampivelatra ireo puce izay manakana ny rindrambaiko napetraka amin'ny telefaona tsy hovaina na afaka mametraka ny rindrambaiko na ROM misy azy manokana ny olona.
Ny poti-loharano misokatra dia hevitra tsara mety hahasoa ny mpiara-monina, saingy aza avela ho voafitaky ny goavambe sy ny fikasany isika.
Fomba roa samihafa hametrahana Google Chrome amin'ny Fedora 31
PostgREST, API REST ho an'ny tahiry angona PostgreSQL voasoratra ao amin'ny Haskell